Jigjigaatti walitti bu'iinsa sirna amantaa hordofee umameen namoonni lama ajjeefaman - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright BBC Somali
Walitti bu'insa kaleessa magaalaa guddoo naannoo Somaalee Jigjigaatti sirna amantaan booda umameen walqabatee badiinsi qabeenyaa fi lubbu namoota irra qaqabuun barame.
Jiraattonni mgaalattiifi hordooftoonni amantaa Ortodoksi kalleessa sirna kabaja 'Astiro maaramii' kabajuuf magaalaa Jigjigaa irraa fageenya km 35 irratti aanaa Gursumiitti kabajanii osoo deebii'aa jiranuu garee dargaggootaa qindaa'aniin dhakaan tumamu BBC'tti himaniiru.
Riipportarrii BBC Somaalee eddoo sanattii argamus namoonni lama ajjeefamusaanii fi afur ammoo miidhaa qaamaatiif saaxilamu gabaaseera.
Abbaan amantaa sirna kabaja sanarratti hirmaatanii turanis ''osoo bataskaanaa deebii'aa jiranu seensa magaalaa irratti dargaggoonni qindooman dhakaa darbachuun namoota buruksuun konkolaatoota cacabsaniiru,'' jedhaniiru.
Akka abbaan amantaa kun jedhanitti, namoonni rasaasaa dhahamanii ajjeefaman lamaanis hordoftoota amantaa ortodoksiiti.
Walitti bu'iinsa humnoota nagaa kabachiftoota waliin umameen namoonni lamaan kunneen kan ajjeefaman.
Barsiisaan yunvarsiitii Jigjigaa dubbisne tokko osoo magaalaa Finfinnee irraa gara Jigjigaatti deebi'anii yommuu magaala Harar galan akka darbuu hin dandeenye itti himamnaan akka magaala Harar bulan himan.
Har'a yommuu magaala Jigjigaa galanis sochiin kanaan dura magaalicha keessa ture hin jirru jedhan.
Abbaan amantaa dubbisnes daandiin gariin cufaa tahuu fi sochiin daldalaa barame akka hin jirre himaniiru.
Ka'umsa walitti bu'insa uumamee fi haala itti raawwate gaafachuf Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Naannichaa Obbo Abdulahi Mahaamad'f bilbillus ''dubbichi qoratamaa waan jiruuf ammaaf yaada isinii kennu hin qabu'' jedhan.
Kanaan dura walitti bu'insa amantaa sababeeffachuun magaalichatti ka'ee mootummaan ''garee Heegoo'' jedhamu raawwate jedhee ture.
Hagayya 27 bara 2010 Jigjigaa dabalatee kutaalee naannichaa bakka garaagaraatti walitti bu'insa uumameen namoonni 96 garee 'Heegoo' jedhamuun ajjeefamuu yeroo sana Komishinera Komishinii Pooilisii Federaalaa kan turan Zeenuu Jamaal BBCtti himanii ture.
Garee kana hoggantoota olaanoo naanichaa duraaniitu qindeesse jechuun Komishinerri Poolisii Federaalaa himeera.
Haaluma wal fakkaatuun magaala Dirree Dhawwaattis yeroo amantootni Ortodoksii ayyaana cuuphaa irraa deebi'an miidhaan irra gahuu himamaa ture.
Walitti bu'insa kana keessaa namootni harka qabu jedhamnis to'annoo jala oolaa tura.
17 Fuulbana 2017
Mohaammad Adeemoo maaliif OBN hoogganuu irraa kaafame?